Cabsi laga qabo in la xiro xawaaladaha Soomaalida ee Sweden | Somaliska
Ka dib markii ay hay’ada la socodka dhaqaalaha (Finansinspektionen) shuruudo adag ku soo rogtay bankiyada Sweden, ayaa bilihii la soo dhaafay waxay cabsi la soo daristay xawaaladaha Soomaalida. Qaar ka mid ah xawaaladaha ayaa laga xiray koontooyinkii ay ku lahaayeen bankiyada Nordea iyo Swedbank, iyagoo hada ka cabsi qaba in laga xiro bankiyada kale.
Mohamed Ibrahim Jees oo ah maamulaha xawaalada Tawakal Express ee xafiiska ku leh xaafada Rinkeby ayaa wargeyska Dagens Nyheter u sheegay in markii Swedbank uu ka xiray koontadooda ay la xiriireen Nordea balse iyagana ay horay diidmo u siiyeen. Hada ayuu sheegay in ay koonto ku leeyihiin SEB balse ay cabsi ka qabaan in daqiiqad kasta laga xiro.
Bankiyada ayaa dhinacooda cabsi ka qaba in ay Finansinspektionen ku soo rogto ganaax aad u badan haddii ay koonto u furan xawaaladaha kuwaasoo aan la socon cida qaadanaysa lacagta ay u diraan Somalia. Sanadkii 2013 ayaa Nordea la ganaaxay 30 milyan oo karoon markii lagu eedeeyay in aysan qiimeyn qatarta lacagaha ay diraan. Finansinspektionen ayaa aaminsan in sanadkasta Sweden laga diro lacag gaaraysa dhowr milyan oo loo diro ururada argagixisada.
Mohamed Ibrahim Jees ayaa wargeyska u sheegay in haddii xawaaladaha laga xiro Soomaalida ay heli doonaan wadooyin sharci daro ah oo ka liita xawaaladaha hada jira.
Ha hilmaamin in aad saacada badasho caawa
Dhagayso: 23 daqiiqo ayaa u dhaxaysa afurka iyo saxuurta